သားသမီးတို့အဘို့ကာကွယ်ဆေး | USAHello ထံမှကနျြးမာရေးအရင်းမြစ်များ | USAHello
တစ်ဦးက ကာကွယ်ဆေး ရောဂါဖမ်းရာမှတစ်စုံတစ်ဦးကိုကာကွယ်မယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါသည်. ကာကွယ်ဆေး (လည်းခေါ် ကာကွယ်ဆေးထိုး) သူတို့ကုသမှုလိုအပ်နေမတိုင်မီလူတွေရောဂါများကိုရှောင်ရှားကူညီ. သူတို့ကဖွံ့ဖြိုး ရောဂါမှကာကွယ်ထားခြင်း ရောဂါ. ရလဒ်အနေဖြင့်, သူတို့ကဖမ်းရန်အလွန်နည်းပါးတယ်.
Children in the USA regularly receive vaccines to help keep them healthy. ကလေးများကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အခါဆရာဝန်များနှင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသူတို့နောက်ကိုလိုက်ရာတိကျတဲ့အချိန်ဇယားဖွံ့ဖြိုး. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရောဂါအခမဲ့နေဖို့ကူညီပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင်တို့၏သားသမီးအချိန်ပေါ်တွင်သူတို့ကာကွယ်ဆေးလက်ခံရရှိကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်.
သငျသညျအထဲကရှာတွေ့နိုင်ပါသည် which vaccines for children are recommended by doctors at what age. Many vaccines should be given early inachild’s life. Ask your doctor if you have any questions.
ကလေးများကနျြးမာရေး ကလေးတွေ '' ကျန်းမာရေး-related အကြောင်းအရာများအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုမိဘများနှင့်လေးတွေများအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. When you get to the website, choose “For Parents.” You will find lots of useful information about vaccines for children and other child health questions you may have. သင်သည်သင်၏ကလေးသည်အတွက်ပုံမှန်တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်, ဘုံကလေးဘဝရောဂါများ, အများကြီး, အများကြီးပို.
Ethnomed ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့ကြရသောကလေးသည်ကျန်းမာရေး-related အရင်းအမြစ်များအများအပြားရှိပါတယ်.